Kutaura nezve basa re ballet TUTU siketi - Nhau - Shenzhen Wudongfang Tsika Kutaurirana Co, Ltd.
Imba > Nhau > Nhau dzekambani > Kutaura nezve basa re ballet TUTU siketi
Ballet TUTU siketindiye akanyanya kupfeka dhanzi dhizaini mune yechinyakare ballet, iyo yakatorwa kubva kune ballet siketi yaLouis XIV. TUTU inogadzirwa neshinda yakakosha uye yakaumbwa sepancake. Iyo inoyevedza inowirirana uye inowirirana.
Iyo inoratidzirwa neiyo pfupi pfupi siketi, isingapfuure kureba kwemabvi, uye yakatambanudzwa kubva muchiuno. Iyo ipfupi-yakaumbwa uye ine yakawanda-yakasara silika jira. Kazhinji, zviyero zvitanhatu kana kudarika zveshinda zvinoshandiswa, izvo zvakapetwa.
Kubva mumaonero emutambi, iyo TUTU siketi iri kunetsa kwazvo kune vatambi. Nekuda kwechiuno, dzinosvika nhatu nhatu dzemakumbo dzakaburitswa pachena, hapana chakavanzika, kuitira kuti vateereri vakoshese kufamba kwetsoka kwemutambi uye chimiro chavo chegumbo, izvo zvinoreva kuti mutambi haatenderwe. Chimiro chegumbo uye kufamba kwacho zvakati netsei, kunova hutsinye hweballet.
Kune vatambi vemitambo, hazviwanzo kugona kupfeka masiketi anodhura eTUTU. Munguva yekudzidzira, ivo vanozove neTUTU siketi ine shinda shoma, uye yunifomu yekurovedza muviri yekudzidzira zuva nezuva.
Uye zvakare, iyo TUTU yemitambo kazhinji ine inoenderana yepamusoro uye yepasi bhurugwa rakabatana zvakabatana. Ndinofanira kupika pano kuti ballerina anopfeka siketi yeTUTU panguva yekutamba. Iwo anonzi mabhurugwa akafumurwa ari chaizvo chikamu chedhirezi rokwe.
Zvisinei, basa rakagadzira TUTU paatari uye kumusoro ndiro rakanyanya kujairika "Swan Lake", uye kunyangwe vanhu pavanoti ballet, ivo vanofunga nezve iyo chena shena yechena yakachena TUTU siketi uye nhema yevatema inoyevedza TUTU siketi. Swan.
Yapfuura:Iko kukanganisa kweye ballet zvipfeko pane yazvino fashoni maitiro
Tevere:Ballet tutu zvipfeko zvakajairwa